JCOP4 စီးရီး JAVA ကဒ်များကောင်းကျိုးများ (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) အီလက်ထရောနစ် ID ကိုကတ်များ၏လယ်ပြင်တွင်
J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180 အဆိုပါ JCOP4 စီးရီး JAVA ကဒ် J2A ပြီးနောက်အခြားအထွတ်အထိပ်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်, J3A, J3D, J3H စီးရီး. မြင့်မားတဲ့လုံခြုံရေးနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်အလို့ငှာ, ဒေတာသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်တိုးပွါး, အဆိုပါ Flash ကို chip ကိုနှင့်အတူ, အဆိုပါချစ်ပ်ရဲ့ကွန်ပျူတာအမြန်နှုန်းပိုမြန်ပြီးပိုတည်ငြိမ်. အဆိုပါ J3H စီးရီးခင်မှာ JAVA (ပါဝင်သော), အားလုံးအသုံး EEPROM ချစ်ပ်, and after the J3R …
RFID frequency နဲ့ Transmission ပါဝါ
RFID frequency နဲ့ Transmission ပါဝါဇယားအပြီးတွင်နိုင်ငံအားဖြင့်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF နှင့် EPCglobal စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်. ဥရောပ၌မြောက်မြားစွာကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားအများဆုံးပါဝါစည်းမျဉ်းရှိပါတယ်သတိပြုပါ. ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ / ကနေဒါစည်းမျဉ်းအချို့သည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ကမွေးစားခဲ့ကြ. တစ်ဦး RFID စနစ်အားအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည် …
10-နည်းနည်းနံပါတ်ထို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးကတ်၏ 8-bit နဲ့နံပါတ်ကူးပြောင်းခြင်းဆက်ဆံရေး
ပုံမှန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, 8-bit နဲ့ကဒ်အရေအတွက်က wiegand26-bit မှာ output ကိုဖြစ်ပါတယ်, 10-bit မှာကဒ်အရေအတွက်က wiegand34-bit မှာ output ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာ, တစ်ကဒ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း: 0013961168 10-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က, သို့မဟုတ် 213 02000 3+5 8-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က. 10-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က 0013961168, hexadecimal ဖို့ဖြစ်ပါတယ် convert 00 D5 07 D0. 8-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က 213 02000, ပထမဆုံး3ဂဏန်း 213 ပြောင်းလဲ …
စာမျက်နှာ 1 ၏ 11
မကြာမီကသတင်း & ဘလော့
NFC ကိုငွေပေးချေမှုကိုထောကျပံ့, ချစ်ပ်များနှင့်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်